जनताले सम्भोग नगर्दा सरकारलाई भो चिन्ता | Hulaki Online
जनताले सम्भोग नगर्दा सरकारलाई भो चिन्ता
January 23, 2017 संप्रेषण
हामीकहाँ जनताहरु उद्यमशील भएनन्, यौनहिंसामा वृद्धि भयो तथा दुर्गम ठाउँहरुमा जनसंख्याको वृद्धिदर पनि बढि भयो भनेर सरकारलाई चिन्ता हुँदो हो । तर जापानमा भने जनताले सेक्सप्रति रुचि नराख्दा सरकारको टाउको दुखेको छ । शिर्षक सँग समन्धित समाचार अझ प्रष्ट सँग सिधै भिडियोमा हेर्न चाहनु हुन्छ भने तलको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला ! र भिडियो नहेरी छापाको पुरै समाचार पढ्न चाहनुहुन्छ भने अलि तल सार्नु होला ! उसै त जापानीहरु निकै मेहेनती तथा काममा डुब्ने मानिसको रुपमा चिनिन्छन् ।
पछिल्लो समय जापानीहरु काममा यति डुब्न थालेछन् की उनीहरुमा सेक्सप्रतिको रुचि नै घटिरहेको छ र जापानमा भर्जिन युवायुवतीहरुको संख्या बढिरहेको छ । देशमा अविवाहित महिला तथा पुरुषहरुको संख्या पनि तिव्र रुपमा बढेर चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ जसका कारण बुढापाकाहरुको संख्याले ढाकेको जापानको जनसांख्यिकी झनै संकटमा परेको छ । जापान देशको जनसंख्याको अनुपातमा वृद्ध नागरिक सबैभन्दा धेरै भएको देश हो । यस्तो विकराल अवस्था हुँदाहुँदै तन्नेरी अवस्थाका जापानीहरुले बिहे नै गर्न छाडेपछि नयाँ बच्चा जन्मिने दर तिव्र रुपमा गिरावट आएको छ ।
सरकारले युवायुवतीहरुले बिहे गर्न तथा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्दै नगद पुरस्कार लगायतका विभिन्न प्याकेट घोषणा गरिरहेको छ । तर मानिसहरु आफ्नो काममा यति व्यस्त छन् की उनीहरुसँग बिहे गर्ने तथा परिवार बसाउने फुर्सद छैन । जापान टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार जापानीहरुमा गरिएको नयाँ सर्भेक्षणले १८ देखि ३४ वर्ष उमेरका ७० प्रतिशत अविवाहित पुरुष तथा ६० प्रतिशत अविवाहित महिलामा सेक्सप्रति कुनै रुची नै छैन ।
यो उमेर समूहका ४२ प्रतिशत पुरुष तथा ४४.२ प्रतिशत महिलाले आफुहरु अहिलेसम्म भर्जिन रहेको खुलासा गरेका छन् । यो सर्भेक्षण जापाने नेसनल इन्स्टिच्यूट अफ पपुलेसन एण्ड सोसल सेक्योरिटी रिसर्चले गरेको हो । शिर्षक सँग समन्धित समाचार अझ प्रष्ट सँग सिधै भिडियोमा हेर्न चाहनु हुन्छ भने तलको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला ! र भिडियो नहेरी छापाको पुरै समाचार पढ्न चाहनुहुन्छ भने अलि तल सार्नु होला !
सन् १९८७ मा गरिएको यस्तै खालको सर्भेक्षणमा ४८.६ प्रतिशत पुरुष र ३९.५ प्रतिशत महिला अविवाहित रहेको पाइएको थियो ।
सन् २०१० को सर्भेमा ३६.२ प्रतिशत पुरुष तथा ३८.२ प्रतिशत महिलाहरुले आफुलाई भर्जिन रहेको बताएका थिए ।